Umahluli waManzi weDizili
Sisebenza njani isahluli samanzi sokucoca amanzi？ 1. I-Fuel ingena kwimingxunya yokuhluza isihlangu kwindawo yokubhabha / yomtya. 2. Izinto ezingcolisayo kunye nenkunkuma ziyasuswa kumafutha njengoko zidlula kwisihluzi. 3. Imidiya yokuhluza ekhethekileyo kwiCartridge isusa amanzi kwisibaso. 4. Amanzi adityanisiweyo abe ngamadrophu amakhulu angena kumngxunya osezantsi wesiporingi okanye isitya sokucoca esicocekileyo. 5. Amafutha acocekileyo aphuma kwisihluzi ngokusebenzisa ityhubhu yeziko. 6. Amanzi afuna ukufunxwa mihla le ngumsebenzisi. Amanzi ozikhethela ...
Umgangatho ophezulu weSahluli saManzi sezahlulelwano samanzi
Inombolo ye-OEM TS0207 ithatha indawo ye-FLEETGUARD: FS19754RACOR: R120PWIX: 33774ISUZU: 8-97605118-0 8-97605118-1 Ukufaka isicelo setraki okanye enye idizili, oomatshini bokwakha Ububanzi beDayamitha yomzimba: 108.5mmUbukhulu: 218mm I-Mack yeTraki, itrektara, i-trailer, i-excavator, ubungakanani bemoto ye-OEM Umgangatho wokucoca amanzi kufunyenwe ukunciphisa ukonakala kunye nokugcina ubushushu busebenzayo. Oku kubaluleke ngakumbi kwizipholisi ...
Excavator Iinkuphelostencils Injini ipetroli / amanzi Umahluli lokucoca ulwelo
Inombolo ye-OEM TS3001 Faka endaweni yeFLEETGUARD FS1006 FF5693 FS1013 FS19870 FS19841 Isihluzi samafutha kunye nesehluli samanzi seMack yeTrakhi, itrektara, itreyila, umfumba, ubungakanani bemoto ye-OEM Iimpawu ezisusa ukungcola emoyeni kwaye ukhusele injini Iphepha lokucoca ulwelo lwe-HV / Custo ...